ज्योतिष – Nepali online news portal
आज २०७८ वैशाख २४ गते शुक्रबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) वैचारिक मतभेद सिर्जना हुनसक्छ । साना–तिना समस्याले सताउँछ । पारिवारीक खटपट बढ्न […]
२४ बैशाख २०७८, शुक्रबार ०७:२७ May 7, 2021 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
आज २०७८ वैशाख २३ गते बिहीबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आज अनावश्यक यात्रा तथा अनावश्यक झमेलामा परिएला । मनोरञ्जनमा लाग्दा अवसर गुम्न […]
२३ बैशाख २०७८, बिहीबार ०७:१६ May 6, 2021 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
आज २०७८ वैशाख २२ गते बुधबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ? मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) नयाँ कामको थालानी या योजना बन्ने । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने वेला छ । न्यायिक कार्यमा सफलता […]
२२ बैशाख २०७८, बुधबार ०७:३६ May 5, 2021 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
आज २०७८ वैशाख २१ गते मंगलबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? मेष शरीरमा स्फूर्ति र उमङ्गको कमी हुनेछ । यात्रामा मालसामान हराउन सक्छ । ससाना समस्यामा अल्झनुपर्नेछ । स्वास्थ्यमा खर्च पनि बढ्न सक्छ । बृष विपरित लिंगीबाट विशेष […]
२१ बैशाख २०७८, मंगलवार ०७:०६ May 4, 2021 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
आज २०७८ वैशाख २० गते सोमबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ ।सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आज आफ्नो क्षेत्रमा प्रभूत्त्व जमाउन सकिनेछ । शुभ समाचार सुन्न पाइएला । दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ । मान […]
२० बैशाख २०७८, सोमबार ०७:१९ May 3, 2021 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
आज २०७८ वैशाख १९ गते आइतबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आज धर्म,कर्ममा रुची बढ्नेछ । गरेका कामबाट राम्रै लाभ हुनेछ । नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ । शुभ […]
१९ बैशाख २०७८, आईतवार ०७:२९ May 2, 2021 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
आज २०७८ वैशाख १७ गते शुक्रबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? मेष नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । धार्मिक कार्य सफल रहनेछ । प्रेम सम्बन्ध कसिलो होला । आज तपाईका लागि रमाइलो दिन छ । बृष अभिभावकको आशीर्वाद […]
१७ बैशाख २०७८, शुक्रबार ०८:४४ April 30, 2021 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
आज २०७८ वैशाख १६ गते बिहीबारको राशिफल
आज २०७८ वैशाख १६ गते बिहीबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? मेष नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । धार्मिक कार्य सफल रहनेछ । प्रेम सम्बन्ध कसिलो होला । आज तपाईका लागि रमाइलो दिन छ । बृष धन खर्चको […]
१६ बैशाख २०७८, बिहीबार ०७:२१ April 29, 2021 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
आज २०७८ वैशाख १५ गते बुधबारको राशिफल
आज २०७८ वैशाख १५ गते बुधबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आज लाभदायक यात्रा हुनेछ । नयाँ कार्यको महत्त्वपूर्ण योजना बन्नेछ । शेयर बाजार र व्यापार, व्यवसायबाट लाभ […]
१५ बैशाख २०७८, बुधबार ०७:१७ April 28, 2021 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
आज २०७८ वैशाख १० गते शुक्रबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? मेष अनावश्यक खर्च बढ्न सक्छ । धार्मिक यात्राको योग । मनमा शान्ति मिल्नेछ। दाम्पत्य जीवन सुखमय हुनेछ । खानपिनमा ध्यान दिनुहोला । बृष अभिभावकको आशीर्वाद मनन गर्नुहोला । […]
१० बैशाख २०७८, शुक्रबार ०६:४३ April 23, 2021 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)